Ọnụ Ọgụgụ 32 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọnụ Ọgụgụ 32:1-42
Ndị ga-ebi n’ebe ọwụwa anyanwụ Jọdan (1-42)
32 Ụmụ Ruben+ na ụmụ Gad+ nwere ọtụtụ anụ ụlọ. Ha wee hụ na ala Jeza+ na Gilied dị mma ịzụ anụ ụlọ. 2 N’ihi ya, ụmụ Gad na ụmụ Ruben bịakwutere Mosis, Elieza onye nchụàjà, na ndị isi nzukọ ahụ, sị: 3 “Atarọt, Daịbọn, Jeza, Nimra, Heshbọn,+ Iliele, Sibam, Nibo,+ na Bion,+ 4 bụ́ obodo ndị Jehova meriiri nzukọ Izrel,+ bụ ala dị mma ịzụ anụ ụlọ. Anyị bụ́ ndị ohu unu nwekwaranụ ọtụtụ anụ ụlọ.”+ 5 Ha sịkwara: “Ọ bụrụ na ihe anyị masịrị unu, ka e nye anyị bụ́ ndị ohu unu ala a ka ọ bụrụ nke anyị. Amanyela anyị ka anyị gafee Osimiri Jọdan.” 6 Mosis wee gwa ụmụ Gad na ụmụ Ruben, sị: “Ụmụnne unu hà ga-agawa agha ununwa ebiri ebe a? 7 Gịnị mere unu ga-eji mee ka obi ghara isi ndị Izrel ike ịbanye n’ala ahụ Jehova ga-enye ha? 8 Ọ bụ ihe a ka nna unu hà mere mgbe m si na Kedesh-bania ziga ha ka ha gaa hụ ala ahụ.+ 9 Mgbe ha ruru na Ndagwurugwu Eshkọl+ hụ ala ahụ, ha mere ka obi ghara isi ndị Izrel ike ịbanye n’ala ahụ Jehova ga-enye ha.+ 10 Ezigbo iwe were Jehova n’ụbọchị ahụ. O wee ṅụọ iyi, sị:+ 11 ‘Ụmụ nwoke ndị si n’Ijipt pụta, malite ná ndị dị afọ iri abụọ gbagowe, agaghị ahụ ala ahụ+ m ṅụrụ iyi na m ga-enye Ebreham, Aịzik, na Jekọb,+ n’ihi na ha ejighị obi ha niile rubere m isi, 12 ma e wepụ Keleb+ nwa Jefune onye Kinaz na Joshụa+ nwa Nọn, n’ihi na ha ji obi ha niile rubere Jehova isi.’+ 13 Jehova wee wesa Izrel iwe dị ọkụ. O mere ka ha gagharịa n’ala ịkpa ruo afọ iri anọ,+ ruo mgbe ọgbọ ahụ niile nke nọ na-eme ihe ọjọọ n’anya Jehova nwụchara.+ 14 Unu anọchiela nna unu hà, unu ndị ajọ omume, ndị na-eme ka iwe Jehova na-ewesa Izrel dịkwuo ọkụ. 15 Ọ bụrụ na unu akwụsị irubere ya isi, ọ ga-ahapụ ha ọzọ n’ala ịkpa, unu ga-emekwa ka e bibie ndị a niile.” 16 Ha mechara bịakwute ya, sị: “Ka anyị jiri nkume gbaara anụ ụlọ anyị ogige, rụọkwara ụmụ anyị obodo. 17 Ma anyịnwa ga-ejikere ịlụ agha+ ma na-aga n’ihu ndị Izrel ruo mgbe anyị kpọgara ha n’obodo ha. Ma ụmụ anyị ga-ebi n’obodo ndị a rụsiri ike, e nweghịkwa ihe ndị bi n’obodo a ga-eme ha. 18 Anyị agaghị alaghachi n’ụlọ anyị ruo mgbe onye ọ bụla n’ime ndị Izrel ketara ala nke ya.+ 19 Anyị agaghị eso ha keta ala ọ bụla dị malite n’ofe Osimiri Jọdan gbagowe, n’ihi na anyị eketala nke anyị n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan.”+ 20 Mosis sịrị ha: “Ọ bụrụ na unu ga-eme ihe a: Jikerenụ ịga lụọ agha otú Jehova kwuru.+ 21 Ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime unu ejikere ịga agha ma gafee Osimiri Jọdan ka ọ lụọrọ Jehova agha, ọ ga-achụpụrụ ya ndị iro ya.+ 22 Unu ga-alụ agha ruo mgbe Jehova nyeere unu aka, unu emerie ndị obodo ahụ.+ Mgbe ahụ, unu nweziri ike ịlaghachi,+ ikpe agaghịkwa ama unu n’anya Jehova nakwa n’anya ndị Izrel. Ala a ga-abụzi ala unu nke Jehova nyere unu.+ 23 Ma ọ bụrụ na unu emeghị ihe a, ọ pụtara na unu emehiela Jehova. Marakwanụ na unu ga-ata ahụhụ mmehie unu. 24 Unu nwere ike ịrụrụ ụmụ unu obodo, jirikwa nkume gbaara ìgwè ewu na atụrụ unu ogige.+ Ma unu ga-emerịrị ihe unu kwere ná nkwa.” 25 Ụmụ Gad na ụmụ Ruben gwara Mosis, sị: “Anyị bụ́ ndị ohu gị ga-eme nnọọ ihe gịnwa bụ́ onyenwe anyị nyere n’iwu. 26 Ụmụ anyị, ndị nwunye anyị, anụmanụ anyị, na anụ ụlọ anyị niile ga-anọrọ n’ebe ahụ n’obodo ndị dị na Gilied,+ 27 ma anyị bụ́ ndị ohu gị ga-agafere, ya bụ, onye ọ bụla dị njikere ịlụ agha n’ihu Jehova,+ otú gịnwa bụ́ onyenwe anyị kwuru.” 28 Mosis wee nye Elieza onye nchụàjà, Joshụa nwa Nọn, na ndị isi ọnụmara dị iche iche n’ebo Izrel iwu banyere ha. 29 Mosis sịrị ha: “Ọ bụrụ na ụmụ Gad na ụmụ Ruben, ya bụ, nwoke ọ bụla dị njikere ịga lụọrọ Jehova agha, esoro unu gafee Osimiri Jọdan, unu ewee merie ndị ala ahụ, unu ga-enye ha ala Gilied ka ọ bụrụ ala ha ketara.+ 30 Ma ọ bụrụ na ha ejikereghị ịga agha, ọ bụrụkwa na ha esoghị unu gafee, ha ga-eso unu biri n’ala Kenan.” 31 Ụmụ Gad na ụmụ Ruben wee sị: “Ihe Jehova gwara anyị bụ́ ndị ohu gị ka anyị ga-eme. 32 Anyị ga-ejikere banye n’ala Kenan gaa lụọ agha otú Jehova kwuru.+ Ma, ala anyị ga-eketa ga-adị n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan.” 33 Mosis wee nye ụmụ Gad na ụmụ Ruben+ na ọkara ebo Manase,+ nwa Josef, ebe Saịhọn+ eze ndị Amọraịt chịrị na ebe Ọg+ eze Beshan chịrị, ya bụ, obodo ndị dị n’ala ndị ahụ nakwa obodo ndị dị n’ala gbara ha gburugburu. 34 Ụmụ Gad wee rụọ* Daịbọn,+ Atarọt,+ Aroa,+ 35 Atrọt-shofan, Jeza,+ Jọg-beha,+ 36 Bet-nimra,+ na Bet-heran,+ bụ́ obodo ndị a rụsiri ike. Ha jikwa nkume gbaara anụ ụlọ ha ogige. 37 Ụmụ Ruben rụrụ Heshbọn,+ Iliele,+ Kiriateyim,+ 38 Nibo,+ na Bel-mion+ (a gbanwere aha ha agbanwe) nakwa Sibma. Ha malitere ịgụgharị obodo ndị ahụ ha rụrụ aha. 39 Ụmụ Mekia+ nwa Manase gara lụso Gilied agha, weghara ya ma chụpụ ndị Amọraịt bi na ya. 40 Mosis wee nye ụmụ Mekia nwa Manase ala Gilied. Ha wee biri na ya.+ 41 Jeya nwa Manase gakwara lụọ agha ma weghara obodo ndị a mara ụlọikwuu. O wee malite ịkpọ ha Havọt-jeya.*+ 42 Noba gara lụso Kinat agha ma weghara ya na ime obodo ndị dị ya nso.* O wee malite ịkpọ ya aha ya bụ́ Noba.
^ Ma ọ bụ “rụgharịa.”
^ Havọt-jeya pụtara “Obodo Jeya Ndị A Mara Ụlọikwuu.”
^ Ma ọ bụ “gbara ya gburugburu.”
Ọnụ Ọgụgụ 32